पहिलो नेपाल आइडल बुद्धले कार चलाउन नपाएको भनेको अडियो भाइरल भए पछि आइडलले यस्तो भन्यो - Dainikee News::
पहिलो नेपाल आइडल बुद्धले कार चलाउन नपाएको भनेको अडियो भाइरल भए पछि आइडलले यस्तो भन्यो
काठमाडौँ, फागुन २५ । एपी वान टेलिभिजनबाट प्रशारित नेपाल आइडलको पहिलो संस्करणका विजेता बुद्ध लामाले नेपाल आइडल भएवापत पुरस्कारमा जितेको कार अहिलेसम्म चलाउन नपाएको गुनासो गरेका अडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएपछि नेपाल आइडलले यस बारे मुख खोलेको छ ।
आइडलले तोकिएको र सम्झाैता अनुसारकाे पुरस्कार रकम बुद्ध लामालाई हस्तान्तरण गरिसकिएको बताएको छ । “पुरस्कारमै पाएको कारको साचो उनलाई त्यतिबेलै एक समारोहका बीच बुझाइ सकिएको छ र उक्त कार त्यतिबेलादेखि नै उनीसँगै छ ।” नेपाल आइडलले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको छ ।
चर्चामा आएको उक्त अडियोमा बुद्धले भनेका छन्, ‘मैले पुस्कारमा पाएको जितेको कार पाएँ, तर ब्लु-बुक पाएको छैन । ब्लुबुक नपाएपछि गाडी कसरी चलाउने ?’
लामाले आफुलाई ८ लाख रुपैयाँ ट्याक्स मागिएको र उक्त रकम आफु निर्ण नसक्ने बताएका थिए ।
आइडलले भने कारको कागजी स्वामित्व उनको नाममा गर्न नियमानुसार नेपाल सरकारलाई कारको मूल्यको २५% (प्रतिशत) आकस्मिक लाभ कर तिर्नपर्ने नियम भएकाले उक्त रकम के, कसरी, कहाँ बुझाउने भनेर पटकपटक लामालाइ जानकारी गरिएको र उक्त कर नेपाल सरकारलाई तिरेपछि कारको कागजी स्वामित्व बुद्ध लामालाई हस्तान्तरण गर्न नेपाल आइडल आतुर रहेको जनाएको छ ।
सार्बजनिक भएको अडियोमा बुद्धले भनेका छन् ‘म कति धाउनु ? कति धाउनु ? आठ महिनादेखि धाउँदैछु हेर्नुस । यो त मेरो खास कामै होइन नी । चेक दियो घरमा पैसा छैन । कताबाट ल्याउने ? आठ लाख माग्छ मैले कहाँबाट ल्याउने ? तिनीहरुले तिरेर ल्याउनुपर्ने होइन र यो त ?’
बुद्धले आफुलाई अप्ठेरो न अप्ठेरो लागिरहेको भन्दै उक्त सन्देश भाइरल बनाइदिन सबैसँग आग्रह गरेका थिए ।
पहिले ट्याक्स आफूले तिर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट नभनिएको र पछि मात्रै यो कुरा थाहा पाएको बुद्ध बताउछन ।
यसबारे नेपाल आइडलले आफ्नो फेसबुक पेजमा यस्तो लेखेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुन २५, २०७४ /Friday, March 9th, 2018, 11:23 am